Posted by Fros November 25, 2014
မြန်မာဖောင့်သီးသန့်ရချင်ရင်တော့ ဒါလေးကို ဒေါင်းလိုက်ပီး သူ့အဆင့်တိုင်း လုပ်လိုက်တာနဲ့ အဆင်ပြေပါသည်…. မှတ်ချက်။ တချို့ဖုန်းများတွင် လုပ်လို့မရပါ ဒါကြောင့် အောက်ကရေးထားသော ဒုတိယနည်းလမ်းကို အသုံးပြုပါရန်...
ifont apk = http://www.mediafire.com/download/8yc24ofinvv41gl
၁။ အနီရောင်အ၀ိုင်းလေးထဲမှာ ‘my’ ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ….
၂။ အောက်ဘက်ထဲမှာ မြန်မာစာဖောင့် ၆မျိုး ၇မျိုးလောက်ပါဝင်ပါတယ် အဆင်ပြေတာကို သွင်းလို့ရပါတယ်…
၃။ လိုချင်တဲ့ဖောင့်ကို တွေ့ပီဆိုရင် enter နှိပ်ပါ။
၄။ download ဆိုပီး ပေါ်လာရင် enter နှိပ်ပါ
၅။ set ဆိုပီး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် enter နှိပ်ပါ.
၆။ new box လေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ok နှိပ်
၇။ new box လေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ok နှိပ်
၈။ theme ထဲကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်.. catagory ထဲက edit theme> ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပီးလိုက် font ဆိုတဲ့နေရာပါတဲ့ page လေး ပေါ်လာပါလာလိမ့်မယ်… font ကို ရွေးလိုက်ပါ.
၉။ သင် ifont ကနေ ဒေါင်းလော့လုပ်ထားတဲ့ မြန်မာစာဖောင့်ကို အဲဒီ့ထဲကနေ ရွေးပီး apply လုပ်ပေးလိုက်ပါ.
၁၀။ သင့်ရဲ့ ဖုန်းမှာ မြန်မာလို မြင်ရပါပီ…
ifont ကို root လုပ်ပီးသား ဖုန်းတွေမှာ သုံးမယ်ဆိုရင်…...
ifont ကို ကောင်းကောင်းအသုံးပြုတတ်လာပီဆိုရင်တော့ အောက်က ဖောင့်လေးများကို ထပ်မံဖြည့်သွင်းပီး စာလုံးလှလှလေးများ သုံးနိုင်ကြပါတယ်… မခက်ခဲပေမယ့် ifont စသုံးသူများအတွက် ဒီအဆင့်မှာ root လုပ်ထားဖို့ လိုတယ်ဆိုတာလေးတော့ သိထားပါ..
roboto regular.ttf = http://www.mediafire.com/download/ghk0rf0yqcx0b46
smart zawgyi pro.ttf = http://www.mediafire.com/download/e86q9hbpa968i56
transformer.ttf = http://www.mediafire.com/download/daoxc3xko5uz0ga
zawgyione ghost.ttf = http://www.mediafire.com/download/6smjcb2e8ffs1ru
မြန်မာစာဖောင့် apk တွေဖြစ်တဲ့
exodus.apk = http://www.mediafire.com/download/hyu34qadw6rchf3
နဲ့ တခြားသော နှစ်သက်ရာဖောင့်များ သုံးနိုင်ကြပါတယ်……
.ttf ဖောင့်များကို သွင်းဖို့အတွက် ifont ရဲ့ အပေါ်ဆုံး ညာဘက်က my button ကို နှိပ်လိုက်ပါ.. ပီးရင် my font ကို ရွေးပီး ဒေါင်းပီး save လုပ်ထားတဲ့ ကိုယ်သွင်းချင်တဲ့ ဖောင့်ဖိုင်လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ…. ပီးရင် theme ထဲမှာ ပြောင်းလိုက်ရုံပါပဲ…
.apk ဖောင့်များကိုတော့ အရင်ဆုံး ဖုန်းထဲကို install လုပ်ပါ… ပီးရင် ifont ရဲ့ အပေါ်ဆုံး ညာဘက်က my button ကို နှိပ်လိုက်ပါ.. ပီးရင် my download ကို ရွေးပီး install လုပ်ထားတဲ့ ဖောင့်ဖိုင်လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ…. ပီးရင် theme ထဲမှာ ပြောင်းလိုက်ရုံပါပဲ…
ကီးဘုတ်အတွက်ကတော့ bagan ကို လင့်ပေးထားပါတယ် တခြားကြိုက်နှစ်သက်ရာ ကီးဘုတ်များလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်..
for note 3g = http://www.mediafire.com/download/01396uqsv8s8a6d
for note 4g = http://www.mediafire.com/download/otyu9om01mg9phr
for 1s = http://www.mediafire.com/download/slj0d2lx7cr1t18
for mi3w/c = http://www.mediafire.com/download/juzrtomro1ghmql
for note 3g = http://www.mediafire.com/download/od15xyil9c7cmzd
for note 4g = http://www.mediafire.com/download/g5v0gnka069heyw
for 1s = http://www.mediafire.com/download/qhajl1r9je272h5
for mi3w/c = http://www.mediafire.com/download/lki8u4dyobbowzs
*mi3 root and unroot for miui v5 version34*
note and 1s root and unroot can do any version
ဒီနေရာမှာ root က note နဲ့ mi3 က ၂မျိုးစီ ခွဲထွက်သွားပါတယ်….
note သမားတွေက 3g သုံးတဲ့လူက 3g root zip နဲ့ သုံးပီး root လုပ်ရမှာဖြစ်သလို 4g သမားတွေကလည်း 4g root zip နဲ့ လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်….
၁။ သင့်ဖုန်းရဲ့ updater ကိုသွားပီး menu key ကိုနှိပ်ပါ၊ install select package ကို ရွေးပါ
၂။ သင့်ဖုန်းအတွက် ဒေါင်းလော့ချထားတဲ့ root zip ဖိုင်ကို ရွေးပီး ok နှိပ်ပါ
၃။ reboot ကျပီး ပြန်တက်လာလျှင် သင့်ဖုန်း rooted ဖြစ်ပါပီ. သို့သော် security>permission>root permission>on ပေးရန်တော့ လိုအပ်ပါသည်..
၄။ သင့်ဖုန်းလေး အထက်ပါအဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်ပီးပါက root access လိုအပ်သော apps များကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်ပါပီ….
၅။ သင်သုံးချင်သော apps များကို install လုပ်လိုက်ပါ. ပီးလျှင် ဖွင့်လိုက်ပါ. root access လိုတယ်လို့ ပြောပါလိမ့်မယ်.. အဲဒီ့အချိန်ကျလျင် security>permission>root access ဆိုတဲ့နေရာမှာ ခုနက root access လိုတယ်လို့ ပြောနေတဲ့ app လေးကို တွေ့ပါလိမ့်မယ် on ပေးလိုက်ပါ. ပီးလျှင် ထို app ကို ပြန်ဖွင့် အသုံးပြုလို့ရသွားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်…. ဒီနေရာကို နည်းနည်းရှည်ရှည် ရှင်းပြရတာက mm font changer တွေ ထည့်ရင် မလွှဲမသွေ ကြုံရမယ့် နေရာဖြစ်နေလို့ပါ…. font changer သုံးမယ့် သူငယ်ချင်းများ smart zawgyi မှ အဆင်ပြေပါမယ်….ကြိုတင်ပြောပြပေးထားတယ်… အားလုံးပဲ အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ…
ဒါကတော့ နည်းလမ်း…၃ ပေါ့ အရမ်းလွယ်ပါတယ် ဒါကြောင့် မပြောပြတော့ပါဘူး...
မြန်မာစာဖောင့်အတွက် myankey pro apk link = http://www.mediafire.com/download/euiboh1dtvd0vv7
အခုတစ်ခါ နောက်ထပ် နည်းလမ်းတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာပြန်ပါပီ… အဲဒါကတော့ fonter apk သုံးပီး မြန်မာစာဖောင့်ထည့်တဲ့နည်းပါ… ifont နဲ့ သုံးရတာ တူပေမယ့် ပိုလာတာ တစ်ခုကတော့ xposed tool သုံးရတာဖြစ်ပါတယ်… လေ့လာချင်သူများအတွက် အောက်မှာ လင့်ပေးထားပါတယ်….. ယခုမှ xposed စသုံးဖူးသူများဆိုရင်တော့ မစမ်းစေချင်ပါဘူး…
fonter = http://www.mediafire.com/download/z336e5uyw3ppndd
xposed = http://www.mediafire.com/download/mdwuclxk8llv80m
မြန်မာစာဖောင့် changer များကို အောက်က နှစ်သက်ရာ သုံးပီး မြန်မာစာဖောင့်ကို ရယူနိုင်ပါပီ...
မြန်မာစာဖောင့် mm font changer for rooted ph:
mmaio = http://www.mediafire.com/download/wq6ujnby3ac7aii
မြန်မာကီးဘုတ် = http://www.mediafire.com/download/hu2cxvbqch266zj
Credit to Author - Tin Htay Ag
Source - all mi ph model can use myanmar font and root
Group - https://www.facebook.com/groups/MyanMi/
Guide Knowledge Phone
koeboyy MHA January 9, 2015 at 11:41 AM
mi4 အတွက် root ရနိုင်မလား
Frost blaze January 9, 2015 at 6:06 PM
ကျနော် မကိုင်ဖူးတဲ့ဖုန်းဆိုတော့ မသိဘူးဗျ.... ဒီ post မှာ ရေးထားတဲ့ link ထဲမှာ သွားမေးကြည့်ပါလားဗျ.. အဲဒီက facebook group မှာဆို mi phone specialist တွေ အများကြီး ရှိတယ်.. အဲ့ဒီမှာ သွားမေးရင် အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်.
wai yan March 5, 2015 at 11:16 AM
mi24G root ရရင်လိုချင်ပါတယ်
Mi4i အတွက်​ root ​ဖောက်​ပြီးမြန်​မာစာ
သွင်းမ၇ဘူးအကို အကုန်​စမ်းပြသ​လောက်​ဘဲဗျ ကူညီပါအုန်း
Frost blaze July 15, 2015 at 1:06 PM
ဟုတ်ကဲ့... ဒီ link ထဲကအတိုင်း လုပ်ကြည့်ကြည့်ပါဦး ဗျ http://frosblaze.blogspot.com/2015/07/mi4i-root-custom-recovery-mmfont.html
Lu Lay November 16, 2015 at 9:24 PM
Mi Note2root and Myanmar font လေးတင်ပေးစေချင်ပါတယ်